Maurizio Sarri Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Maurizio Sarri nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Manager onye kacha mara aha na aha njirimara “Mister 33".
Anyị Maurizio Sarri Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ihe mere eme ya na Napoli. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole na-atụle Maurizio Sarri's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Maurizio Sarri Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Maurizio Sarri mụrụ na ụbọchị 10 nke Jenụwarị 1959 nye ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Amerigo Sarri na mpaghara Bagnoli nke Naples Italy.
Maurizio Sarris sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti site na nna ya bụ onye bụbu onye ọrụ na-ewu ụlọ maka Italsider, ụlọ ọrụ nchara ndị Italiantali.
A zụlitere ya na mpaghara Figline Valdarno dị na Province nke Florence, Italytali.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Sarri nwere mmasị na agụmakwụkwọ na ịkụ bọl. Maka ezinụlọ ya, agụmakwụkwọ malitere.
Sarri gụrụ akwụkwọ nke ọma ma mechaa bụrụ onye akụ na ndị ama ama Banca Monte dei Paschi di Siena (dị n'okpuru ebe a) na Tuscany, Italy.
Mgbe ọ bụ onye na-azụ ego, ọ hụrụ onwe ya ka na-arụ ọrụ n'etiti ọrụ ụlọ akụ ya ma na-egwu bọọlụ amateur.
O doro anya na ọ bụ ọrụ ụlọ akụ Sarri kpọpụrụ ya n'Italytali ebe ọ rụrụ ọrụ na ngalaba ụlọ akụ ya na London, Zurich na Luxemburg.
N'agbanyeghị na ọ na-etinye aka na football, mmasị Maurizio Sarri na-egwu egwuregwu amateur abụghị naanị echiche efu.
N'oge ahụ, Sarri ga-arụ ọrụ n'ụlọ akụ n'ụtụtụ ma kụzikwa ụfọdụ ndị na-amu amu egwuregwu n'ehihie na mgbede.
Maurizio Sarri Banking Akụkọ:
Na 1999, mgbe ọ dị afọ 40, Maurizio Sarri kpebiri ịkwụsị ọrụ ụlọ akụ ya iji rara ndụ ya niile nye ọzụzụ na ịgba bọl.
N'ezie, ndị bịara ibe ya na-echekwa ego nọ na-aga nke ọma ka ha nọ na foto dị n'okpuru.
Mgbe ọ lara ezumike nká n'ọrụ ụlọ akụ ya, Sarri hụrụ na ọ meela agadi ịgba bọọlụ. N'ụzọ dị mwute, ọ hapụwo ọkpụkpọ ọrụ ọkachamara.
Sarri laghachiri totali ka ọ bụrụ onye na-elekọta ụlọ ọgbakọ AC Sansovino nke dị na Monte San Savino, Italytali.
N’agbata afọ 1990 rue 1999, tupu Maurizio Sarri lara ezumike nká n’ụlọ akụ, o jikwa ndị otu 6 rụọ ọrụ; Stia, Faellese Cavriglia, Antella, Cavriglia na Tegoleto.
Maurizio Sarri Biography - Bilie na-ewu ewu:
Mgbe ọ dị agadi 40, Maurizio Sarri enwetawo ahụmịhe niile na njikwa football.
Ọtụtụ klọb ndị ọ jikwaa dị ka njikwa onye na-ajụ ajụjụ ọ bụla ma ọ gaghị enwe ike itinye aka na mkparịta ụka mbufe.
Mr 33 anọwo mgbe nile Aha aha Sarri n'ihi ọnụ ọgụgụ nke usoro ihe omume ọ na-agwa ndị egwuregwu ka ha rụọ.
N'etiti 2000 ruo 2015, Maurizio Sarri mechara chịkọta ìgwè 10 tupu Napoli akpọ ya ebe o mechara mee onwe ya aha.
Roman Abramovich goro ya ụgwọ n'ihi na ọ hụrụ eziokwu ahụ n'anya Maurizio Sarri enweghị mmasị na nnyefe arụmụka, n'adịghị ka ndị bu ya ụzọ ga-ekwenyeghị ya na mkpebi mbufe.
N'ihi ya, Sarri ghọrọ onye isi nchịkwa 13th na-adịgide adịgide nke Chelsea Abramovich's nwe nke malitere na June 2003. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ ezinụlọ Maurizio Sarri:
Tupu ịnara oche a na-ewu ewu na Stamford Bridge, Sarri biri ndụ ndị mọnk na ndụ dị jụụ na Italian Riviera ya na nwunye ya mara mma bụ Marina nwa ha na nkịta ha.
Nwunye ya, Marina (nke dị n'okpuru ebe a) nwere mmasị na ịkwọ ụgbọala ya gburugburu obodo Italiantali.
N'agbanyeghị na a na-eji ogologo njem na-aga gburugburu obodo, Sarri agaghị agbanahụ echiche banyere egwuregwu ahụ.
Italian Riviera, ebe Sarri, nwunye ya na nwa ya nwoke bi na Italytali bụ obere ala dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian nke gafere n'etiti ndịda France na Tuscany.
N'ebe a na-abụghị obodo mepere emepe, ụlọ ndụ nke Maurizio Sarri dị jụụ ma pụọ ​​na igwefoto ya na nwunye ya na nwa ya nwoke.
Tupu ya etinye aka na Chelsea, ndị ezinụlọ Maurizio Sarri na-ahụ ya dị ka onye na-agba mbọ ịkụ bọlbụ dịka ọrụ. Dị ka Sarri n'onwe ya si etinye ya;
"Mgbe m gara iduzi ọzụzụ, anaghị m asị ezinụlọ m: 'Aga m arụ ọrụ,'"
ọ gwara akwụkwọ akụkọ bụ Avvenire.
"M si n'ezinụlọ ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na m nụ ka mmadụ na-ekwu banyere 'àjà' na bọlbụ, enwere m iwe."
“Ọ na-amasị m izu ike tupu mụ egwuwa egwuregwu ọ bụla, n’ihi ya, anaghị m ewe iwe. Ana m enyefe nwunye m na nwa m mmeri m niile ”
Eziokwu Maurizio Sarri:
Maurizio Sarri akọwawo ya na mgbasa ozi n'ịntanetị dị ka a chain-smoking maverick onye kwuru na ọ na-ese siga 60 sịga n'ụbọchị ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ ghara inwe nrụgide.
Ugbu a ajụjụ ọtụtụ fans ga-ajụ bụ; Hdị ka Maurizio Sarri na-ese siga n'oge egwuregwu?. Azịza ya bụ “Ee!".
N'ịbụ ndị na-ese anwụrụ ọkụ na ebe nkiri, Sarri ka na-ese siga, nke a na-eji ya ụta siga dị ka a hụrụ n'okpuru oge egwuregwu.
Na 2018, UEFA Europa League opponents, RB Leipzig, nke Napoli, wuru mpaghara pụrụ iche na-ese anwụrụ n'ime oghere ime ụlọ ha maka Sarri bụ onye a na-ahụ dịka onye na-aṅụ sịga na-agụ agụụ n'oge egwuregwu.
dries Mertens emeela atụmatụ otu ụbọchị Sarri na-eri kwa ụbọchị na ise n'ime ngwugwu ndị dị n'elu otu ụbọchị. Na-enweghị ị smokingụ sịga, Sarri na-enwekwa kọfị.
Na Napoli, ọ ga-achọ ka onye na-ere ahịa ụlọ ọrụ ahụ wetara ya espresso ọhụrụ n'oge ọzụzụ na oge ezumike ụbọchị.
Maurizio Sarri akụkọ nke na - enweghị isi okwu:
Sarri kpọrọ ndị na-ese foto na ndị nta akụkọ na-ajụ ajụjụ nzuzu ma ọ bụ zute ya maka ajụjụ ọnụ na-enweghị nkwenye ya.
O doro anya, ọ maghị otú ọ ga-esi bụrụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị banyere okwu ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ma ndị odeakụkọ na ndị agbapụ ya gbaghara ya.
Sarri nwere azịza jọgburu onwe ya nye onye nta akụkọ nke na-aga n'okwu ndị a;
Bụ nwanyị, ị dị mma, yabụ agaghị m agwa gị ka ịpụ! '
Nke a bụ Maurizio Sarri na-aza na ejiji na-abụghị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe otu nwanyị odeakụkọ chere ya ihu.
N'ịchọ ịgbanahụ ntaramahụhụ, Maurizio Sarri rịọrọ mgbaghara ozugbo ihe o kwuru gasịrị.
Okwu jọgburu onwe ya bịara n'ihi na iwe were ya mgbe 0-0 nke Napoli gbara na Inter na San Siro. Nke a mere ka otu onye otu ya buru ụzọ mee ka Juventus bilie n'elu ha site na isi.
Tupu nzaghachi ya na-eme ihe ọjọọ, nwanyị odeakụkọ na-ajụ ya ajụjụ a n'ezie;
“Ajụrụ m gị maka ebumnuche gị maka ịsị na afọ juru gị na nsonaazụ ya, anaghị m aghọta afọ ojuju nke ịgbadata na tebụl. Biko kọwaa ”
Maurizio Sarri akụkọ nke na - Eziokwu Conte:
Ị maara??, ọ bụghị nke mbụ akụkọ achụọla ya ma dochie ya Maurizio Sarri dị ka ị nwere ike ịma site na Chelsea FC n'ọnọdụ.
Ma dị ka ọtụtụ ndị njikwa n'ihu ya, akụkọ enweghị ike ịnọgide na-enwe ezigbo mmekọrịta mmekọrịta na ụlọ ọrụ Chelsea.
O doro anya, a na-amanye ya ịrụ ọrụ na ndị egwuregwu ọ na-arịọghị.
Mgbe otu akụkọ na-etinye aka na Ọkọlọtọ na-adaba na egwuregwu Calciopoli na 2006 (ihe ahụ hụrụ na Juventus kwụsịrị), Ọrụ nke idebe ọrụ nchịkwa mbụ ya na Arezzo bụ onye nọ na ngalaba nke abụọ nke wastali agaghị adị mfe site na ntaramahụhụ isi isii n'aka.
N'ụzọ dị mma, onyeisi oche ọgbakọ Piero Mancini malitere ịchọ onye njikwa nwere ahụmahụ. A chụrụ Antonio Conte n'ọrụ ma webata Sarri ka ọ nọchie ya.
Olileanya na nlanarị ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a na aha Sarri. O di nwute, na oge agafeela ka a ghaghi iweghachite Arezzo kama o gara na odighi ego ma o nwetaghi mgbe obula.
Maurizio Sarri Ihe omuma banyere ihe omuma - Ihe Ochie:
A na-ahụ Maurizio Sarri dịka onye njikwa na onye ọkachamara nke oge ochie bụ onye na-enwe nkuzi dị ka akụkụ nke ọzụzụ ya. Isi okwu ndi isi ya bu; “Bọọlụ ndị kwụ otu ebe, nkuku na nkata mgbachapụ ụkwụ”
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Maurizio Sarri na nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.